20 amadolobha amahle eGalicia I | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | General, Yini ongayibona, travel
IGalicia ingelinye lalawo mazwe aqala ukuthandana, noma ngabe wazalelwa kuyo noma cha. Indawo okungeyona enye yezikhangiso kakhulu, kepha nokho, ngokubona kwayo, ikwazile ukuthola isikhundla ezindaweni ezihamba phambili eSpain ngezinto eziningi. Okwabantu bayo, amabhishi alo, izindawo zalo zemvelo kanye ne-gastronomy yayo. Kungenzeka uye waya eholidini futhi wadabula amadolobha amakhulu ngaphandle kokubona ukuthi ulahlekelwe okuthile okukhulu kakhulu: amadolobha alo amahle.
Namuhla sizokunikeza ukukhetha kokuqala kwefayela le- 20 amadolobha amahle eGalicia, futhi sizokwehluleka. Bonke banokuthile okukhethekile, okuthile okufanele badlule kukho futhi bahlale kancane ukuthola ukuthi yini ebenza babaluleke kangaka. Ngakho-ke usungvele ungenza uhlu lwamadolobha okufanele uwavakashele lapho ubuyela lapho.
1 I-Combarro, iPontevedra
2 I-Ribadavia, i-Ourense
3 U-Allariz, u-Ourense
4 ICambados, iPontevedra
5 I-San Andrés de Teixido, A Coruña
6 O Cebreiro, uLugo
7 I-Ortigueira, i-A Coruña
8 UMonforte de Lemos, uLugo
9 UBaiona, Pontevedra
Siqala ngelinye lamadolobha okuthi yize emancane abe nokutheleka okukhulu kwabavakashi. Le yiCombarro, etholakala eRías Baixas, indawo eyaziswa kakhulu ngamabhishi ayo kanye ne-gastronomy. E-Combarro sizothola indawo ejwayelekile yokudoba enezithombe eziyiqiniso kangangoba sizochitha usuku sithatha izithombe. I- izikebhe ezincane ezinemibala, izindlu zamatshe, imigwaqo emincane nezindawo zokudlela eziphaka ukudla kwasolwandle kuyinto yakudala. Kepha ngaphezu kwalokhu, kuzofanela ubone leli dolobha ngezinqolobane ezinhle ezibheke ichweba kanye neziphambano zamatshe.
I-Ribadavia ingelinye lalawo madolobha asagcina ubuhle bawo obudala. Okunye ukuvakasha okubalulekile yi- Inqaba yeSarmiento. Uma ufika ehlobo ungayijabulela iFesta da Istoria, enedolobha eligqoka njengelenkathi ephakathi, futhi uma kungenjalo, ungahlala uthokozela iwayini ne-octopus tapa.
I-Allariz ingelinye lalawo makhaya aqaphile ukuthi angalahlekelwa yiyo yonke intelezi endaweni yakhona endala, ngakho-ke igcinwe kahle. Uma sifuna ukubona ifayela le- idolobha elidala eligcinwe kahle ngentelezi, kufanele siye kuleli dolobha elincane e-Ourense. Funa iSonto LaseSantiago de Allariz, elinye lamaphuzu alo athakazelisa kakhulu, futhi-ke zama ukuzilahlekisela ngokuthula ngemigwaqo yalo enezintambo, okuthiwa yenziwe ngezinsalela zenqaba endala engasekho.
E-Rías Baixas kukhona amakhona amaningi athakazelisayo, hhayi ize ingenye yezindawo zabavakashi kakhulu. Sithola idolobha laseCambados, elidume kakhulu ngenxa yokuthi iwayini lalo i-Albariño selidume kanjani. Ngaphezu kokuma ukunambitha la mawayini adumile kwelinye lamawayini awo, kufanele sibone izinto ezithile ezinjengezinsalela USanta Mariña de Dozo, maphakathi nedolobha, itshe elihle iPazo de Fefiñáns neTorre de San Sadurniño.
I-San Andrés de Teixido, A Coruña
Kuthiwa noma ngubani ongayi eSan Andrés de Teixido njengomuntu ofile uyaphila, ngakho-ke kuzodingeka sidlule lapha kungekudala noma ngokuhamba kwesikhathi, futhi nakanjani lolu hambo lukufanele. I-villa encane kakhulu kepha enemibono emangalisayo emaweni. Ukuvakashela indawo yayo engcwele kuyisidingo, futhi futhi ujabulele ukubukwa kolwandle uma ufika kule ndawo enelukuluku lokuhambela. Ngoba kungenjalo, khumbula ukuthi kufanele uhambe emoyeni lapho ushiya lo mhlaba.
O Cebreiro, uLugo
I-O Cebreiro yidolobhana eliseLugo futhi lidume ngokuthola kabusha i- palloza ejwayelekile, ezinye izakhiwo zokhokho ezazingasasebenzi. Ngaphandle kokungabaza kuyindlela yokubuyela emuva esikhathini ukuthola ukuthi abantu babephila kanjani kungekudala kule ndawo yentaba yaseLugo. Akufanele siyeke ukusondela eSerra do Caurel naseSil canyons ngemuva kokujabulela umlando wama-pallozas amangazayo e-O Cebreiro.
I-Ortigueira, i-A Coruña
I-Oritgueira yidolobha elisogwini eselidume ngalo umkhosi wasehlobo womculo we-celtic. Eduze singathola amabhishi amahle futhi nebhange elaziwayo elinemibono emihle kakhulu emhlabeni, emaweni aseLoiba. Ukuvakashela kuleli dolobha elinetheku nezindawo zemvelo ezizungezile kungenye yezindlela ezinhle kakhulu esingazenza.
UMonforte de Lemos, uLugo
IMonforte de Lemos ivelele ngaphezu kwakho konke ngokuba yindawo ebaluleke ezikhathini zasendulo, idolobha eliyinqaba lapho izakhiwo eziningi zigcinwa khona. Kule ndawo ungajabulela isigodlo sayo esidumile ngeTorre del Homenaje, indawo yayo ebaluleke kakhulu, i- I-Count Palace noma i-Benedictine Monastery. Ungavakashela amaphuzu omlando amaningi kuleli dolobha elihle laseLugo, njenge-Old Bridge, okuthiwa inomsuka waseRoma. Impela ubuhle bayo abunakuphikwa.
Siqede lesi simo sokuqala nedolobha laseBaiona, engxenyeni eseningizimu yeGalicia. Yidolobha elithule elisogwini lolwandle, elibheke eziqhingini ezidumile zaseCíes. Eqinisweni, kuleli dolobha ungathatha isikebhe ukuze ubavakashele. Kepha okokuqala kufanele sijabulele amabhishi amahle kanye ne Inqaba yaseMonterreal. Sizophinda futhi sithole umfanekiso wekharavel de la Pinta ethekwini laseBaiona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » 20 amadolobha amahle eGalicia I
Amasiko Asendaweni Angajwayelekile Abavakashi